किन बोलाइएनन् पोखरेल, थापा र पौडेल झम्सिखेलको त्यो गोप्य बैठकमा? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
किन बोलाइएनन् पोखरेल, थापा र पौडेल झम्सिखेलको त्यो गोप्य बैठकमा?
नेपालखबर काठमाडौँ माघ २८
पोखरेल, पौडेल र थापा (वायाँबाट क्रमशः)
विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको पर्यटकीय स्वीस नगरी डाभोसमा रहेकै बेला १० माघमा ललितपुरको झम्सिखेलस्थित एक घरमा नेकपा केन्द्रीय सचिवालयका ५ जना सदस्यहरुको गोप्य बैठक भयो।
बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयका रहेका तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री र दुईजना पूर्व उपपप्रधानमन्त्री सहभागी थिए। तिनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए।
तर, काठमाडौँमै रहेपनि नेकपा सचिवालयमा रहेका तीन जना नेताहरु बैठकमा सहभागी भएनन्। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र महासचिव बिष्णु पौडेललाई झम्सीखेल बैठकबारे जानकारी नहुँदा उपस्थित थिएनन्।
दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रचण्डसहित केन्द्रीय सचिवालयका ५ सदस्य उपस्थित बैठकमा पोखरेल, थापा र पौडेल किन बोलाइएनन् भन्नेकुरा यतिबेला नेकपा पंक्तिभित्र चर्चाको विषय बनेको छ। प्रचण्ड निकट भएपनि गृहमन्त्री बादललाई बैठकमा नबोलाइनु पूर्व माओवादी खेमाका लागि पनि आश्चयको विषय बनेको छ।
काठमाडौँमा रहेपनि नेकपाका यी तीन शीर्ष नेताहरुलाई नबोलाइनु कारण थियो, बैठकमा छलफल हुने बिषय। स्रोतका अनुसार, सरकारको काम कार्वाही र पार्टी एकताले पूर्णता पाउन नसकेको विषयमा छलफलका लागि सो बैठक आयोजना गरिएको थियो।
नेताहरुबीच १० माघमा बैठक बस्नुअघि नै सरकारको काम कार्वाही सुस्त रहेको, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, केन्द्रमा एकता भएको बर्ष दिन बित्न लाग्दापनि एकताले पूर्णता पाउन नसकेको र यसको कारक ओली रहेकाले अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बैठक आयोजना गरिएको थियो।
महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा अरु नेताहसँग सल्लाह नगर्ने निष्कर्ष निकालेका उनीहरुले एकताले पूर्णता पाउँदा महत्वपूर्ण निर्णय पार्टीबाट गर्नुपर्ने हुँदा आफूखुसी गर्न नपाउने भएकाले ओली पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने पक्षमा नरहेको ठहर नेताहरुले पहिल्यै गरिसकेका थिए।
‘त्यसो भए कसरी जाने त?’ त्यही ‘कसरी जाने’ जाने भन्ने बाटो तय गर्न झम्सिखेल बैठकको आयोजना गरिएको थियो। बिषय नै यस्तो तय गरिएकाले बैठकमा ककसलाई बोलाउने? भन्ने तय नेताहरुले बैठक अगावै तय गरे। बैठकमा उपस्थित हुने मापदण्ड दुई विषयलाई ध्यान दिएर तय गरियो।
ती दुई मापदण्ड थिए, सरकारमा नभएको नेता हुनुपर्ने। र, पार्टी एकता सम्बन्धी कार्यदलमा पनि रहेको हुन नहुने। आफै सरकारमा नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएका कारण उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापा बैठकमा बोलाइएनन्।
दुईमध्ये पोखरेल नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा ओली निकट मानिन्छन्। पछिल्लो समय उनी ओली बाहेकका शीर्ष नेताविरुद्ध असहिष्णु रुपमा प्रकट हुन थालेको अनुभूति अन्य नेताहरुले गरेका छन्। पोखरेलले पछिल्लो समय अप्रत्यक्ष रुपमा, तर मज्जासँग बुझिने गरी प्रचण्डविरुद्ध फेसबुकमार्फत् प्रहार गरिरहेका छन्।
जहाँसम्म गृहमन्त्री थापाको विषय हो, नेकपाभित्र उनी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। तर, गृहमन्त्री रहेका कारण उनले पनि प्रम ओलीको आलोचना गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष नेताहरुको रहेकाले उनलाई पनि बैठकमा नबोलाइएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका भनाईमा, ओली रिसाउने भयले मन्त्री परिषद बैठकमा समेत थापा एक शब्द बोल्दैनन्। ‘ओलीले हुँदैन भनेपछि मन्त्री परिषद बैठकमा आफूले लगेका फाइल समेत गृहमन्त्री थापाले चुपचाप फिर्ता लिनुहुँदो रहेछ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, उहाँपनि ओलीविरुद्ध क्रिटिकल्ली जान सक्नुहुन्न भन्ने विश्लेषणका साथ उहाँलाई नबोलाइएको हो।’
महासचिव पौडेलचाहिँ गृहमन्त्री थापा संयोजक रहेको पार्टी एकता सम्बन्धी कार्यदलको सदस्य छन्। अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट सम्बन्धका अलावा सचिवालयका अन्य सदस्यहरुबीच पौडेलले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने गरेका छन्। तर, उनी पनि कार्यदलको सदस्य भएका कारण बोलाइएनन्।
१० माघ विहान झण्डै तीन घण्टा भएको गोप्य बैठकले पार्टी एकताका सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेपकारी निर्णय गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। छिटो एकता सम्पन्न नगर्ने हो भने पार्टीका लागि दुर्भाग्य हुने बताउँदै नेताहरुले आवस्यक परे केन्द्रीय सचिवालयको बहुमतबाट भएपनि एकता सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
सहमतिबाटै निर्णयको प्रयास गर्दा सहमति नहुने, त्यसका कारण एकताले पूर्णता पाउन झन् ढिलो हुने उनीहरुको निष्कर्ष थियो।
प्रकाशित २८ माघ २०७५, सोमबार | 2019-02-11 18:03:07